ပင်လယ်ရေအောက် ဖိုင်ဘာကေဘယ်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့်ဧရိယာနှင့်ရက်စွဲတို့အား ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်၍ ရေကြောင်းသတိပေးချက် ထပ်မံထုတ်ပြန် | Ministry Of Information
ပင်လယ်ရေအောက် ဖိုင်ဘာကေဘယ်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့်ဧရိယာနှင့်ရက်စွဲတို့အား ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်၍ ရေကြောင်းသတိပေးချက် ထပ်မံထုတ်ပြန် /
ပင်လယ်ရေအောက် ဖိုင်ဘာကေဘယ်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့်ဧရိယာနှင့်ရက်စွဲတို့အား ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်၍ ရေကြောင်းသတိပေးချက် ထပ်မံထုတ်ပြန်
Submitted by admin on Sat, 11/21/2020 - 10:32
ကွန်ရက်အထောက်အကူပြု ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အထူး) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပင်မ ဝင်ပေါက် ထွက်ပေါက်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထား သည့် Campana Mythic Co.,Ltd သည် မြန်မာ-စင်္ကာပူ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ပင်လယ်ရေအောက် ဖိုင်ဘာကေဘယ် သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းကို MV.Majestic Seven (Call Sign: XYGK), Asean Protector (Call Sign: 9VYR5) Royal Nadi သင်္ဘော သုံးစင်းတို့ဖြင့် Point. A1 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၃၁ မိနစ် ၉၁၉ စက္ကန့် ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ် ၀၂၁ စက္ကန့်၊ Point. A2 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ် ၀၆၈ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ် ၃၃၉ စက္ကန့်၊ Point. B တွင် မြောက် လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၃၁ မိနစ် ၄၆၅ စက္ကန့် ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၂ မိနစ် ၁၉၂ စက္ကန့်၊ Point. C တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၂၈ မိနစ် ၂၄၀ စက္ကန့် ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၂ မိနစ် ၃၃၇ စက္ကန့်၊ Point. D တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၂၉ မိနစ် ၃၃၇ စက္ကန့် ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၂၄၀ စက္ကန့်၊ Point. E တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ် ၇၁၆ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၃ မိနစ် ၂၂၉ စက္ကန့်၊ Point. F တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ် ၈၃၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ် ၅၈၉ စက္ကန့်၊ Point. G1 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၂၂ မိနစ် ၂၂၂ စက္ကန့် ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၂ မိနစ် ၁၅၈ စက္ကန့်၊ Point. G2 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ် ၂၃၈ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၃ မိနစ် ၀၉၈ စက္ကန့်၊ Point. H တွင် မြောက် လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၂၂ မိနစ် ၃၀၄ စက္ကန့် ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၅၇၅ စက္ကန့်၊ Point. I တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၁၉ မိနစ် ၈၅၁ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၉ မိနစ် ၂၅၈ စက္ကန့်၊ Point. J တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၂၂ မိနစ် ၀၅၄ စက္ကန့် ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၉ မိနစ် ၅၆၄ စက္ကန့်၊ Point. K တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၁၆ မိနစ် ၇၉၃ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၃၇ မိနစ် ၄၄၆ စက္ကန့်၊ Point. L တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၁၈ မိနစ် ၃၀၇ စက္ကန့်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၃၉ မိနစ် ၇၄၃ စက္ကန့်၊ Point. M1 တွင် မြောက် လတ္တီတွဒ် ၁၅ ဒီဂရီ ၅၃ မိနစ် ၆၁၇ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၃၆ မိနစ် ၈၈၂ စက္ကန့်၊ Point. N1 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၅ ဒီဂရီ ၅၃ မိနစ် ၃၅၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၃၉ မိနစ် ၁၂၃ စက္ကန့် Point. M2 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၅ ဒီဂရီ ၅၂ မိနစ် ၁၃၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၃၆ မိနစ် ၅၅၇ စက္ကန့်၊ Point. N2 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၅ ဒီဂရီ ၅၁ မိနစ် ၆၈၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၃၈ မိနစ် ၇၄၈ စက္ကန့် တို့တွင် (၂၀.၁၁.၂၀၂၀)မှ(၂၉.၁၂.၂၀၂၀)အထိ လည်းကောင်း၊ RV.Garda (Call Sign: YCYR2),C.S NIWA (Call Sign: A6E2964)၊ သင်္ဘောနှစ်စင်းဖြင့် Point. M2 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၅ ဒီဂရီ ၅၂ မိနစ် ၁၃၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၃၆ မိနစ် ၅၅၇ စက္ကန့်၊ Point. N2 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၅ ဒီဂရီ ၅၁ မိနစ် ၆၈၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၃၈ မိနစ် ၇၄၈ စက္ကန့်၊ Point. M3 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၄၈ မိနစ် ၅၄၆ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၂ မိနစ် ၃၃၉ စက္ကန့်၊ Point. N3 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၄၈ မိနစ် ၆၆၅ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၉၅၁ စက္ကန့်၊ Point. M4 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၁၀ မိနစ် ၆၀၈ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၉ မိနစ် ၈၆၈ စက္ကန့်၊ Point. N4 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၁၀ မိနစ် ၄၉၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၂ မိနစ် ၄၇၉ စက္ကန့်၊ Point. M5 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၇ မိနစ် ၆၅၇ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၁ မိနစ် ၁၉ စက္ကန့်၊ Point. N5 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၈ မိနစ် ၂၅ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၃ မိနစ် ၄၈၁ စက္ကန့်၊ Point. M6 တွင် မြောက် လတ္တီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၆ မိနစ် ၆၁၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ် ၆၉၉ စက္ကန့်၊ Point. N6 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၆ မိနစ် ၈၀၅ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၃ မိနစ် ၇၃၅ စက္ကန့်၊ Point. M7 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၄ မိနစ် ၇၈၉ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၉ မိနစ် ၅၆၅ စက္ကန့်၊ Point. N7 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၄ မိနစ် ၂၆၆ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၁ မိနစ် ၉၃၁ စက္ကန့်၊ Point. M8 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၄၅ မိနစ် ၂၈၃ စက္ကန့်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၈ မိနစ် ၂၉၈ စက္ကန့်၊ Point. N8 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၄၅ မိနစ် ၀၄၁ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ် ၅၂၃ စက္ကန့်၊ Point. M9 တွင် မြောက် လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၄၃ မိနစ် ၈၀၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၇ မိနစ် ၉၂၃ စက္ကန့်၊ Point. N9 တွင် မြောက် လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၄၂ မိနစ် ၅၆၆ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၉ မိနစ် ၉၀၃ စက္ကန့်၊ Point. M10 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၄၂ မိနစ် ၆၆၈ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၇ မိနစ် ၃၅၁ စက္ကန့်၊ Point. N10 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၄၁ မိနစ် ၀၅၃ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၉ မိနစ် ၀၀၂ စက္ကန့်၊ Point. M11 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ဒီဂရီ ၄၁ မိနစ် ၁၀၈ စက္ကန့်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၅ မိနစ် ၂၁၄ စက္ကန့်၊ Point. N11 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၃၉ မိနစ် ၇၇၄ စက္ကန့်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၇ မိနစ် ၃၃၄ စက္ကန့်၊ Point. M12 တွင် မြောက် လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ် ၃၈၅ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၉ မိနစ် ၅၀၂ စက္ကန့်၊ Point. N12 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၂၉ မိနစ် ၆၇၈ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၁ မိနစ် ၉၃၈ စက္ကန့်၊ Point. M13 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၂၇ မိနစ် ၂၄၆ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၈ မိနစ် ၈၉၇ စက္ကန့်၊ Point. N13 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၂၆ မိနစ် ၆၀၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၁ မိနစ် ၀၁၉ စက္ကန့်၊ Point. M14 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၂၄၁ စက္ကန့်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၇ မိနစ် ၅၅ စက္ကန့်၊ Point. N14 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၂၃ မိနစ် ၃၇၃ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၉ မိနစ် ၇၅ စက္ကန့်၊ Point. M15 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၂၁ မိနစ် ၅၀၅ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၅ မိနစ် ၁၂၃ စက္ကန့်၊ Point. N15 တွင် မြောက် လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ် ၆၁၉ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၇ မိနစ် ၆၀၂ စက္ကန့်၊ Point. M16 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၁၉ မိနစ် ၀၈၈ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂ မိနစ် ၉၇၈ စက္ကန့်၊ Point. N16 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၁၈ မိနစ် ၀၉၇ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၅ မိနစ် ၀၉၆ စက္ကန့်၊ Point. M17 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၁၇ မိနစ် ၁၄၅ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁ မိနစ် ၉၄၂ စက္ကန့်၊ Point. N17 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၁၆ မိနစ် ၅၀၆ စက္ကန့်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၄ မိနစ် ၁၇၄ စက္ကန့်၊ Point. O1 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၁၃ မိနစ် ၄၅၆ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁ မိနစ် ၁၆၂ စက္ကန့်၊ Point. P1 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၁၃ မိနစ် ၁၁၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၃ မိနစ် ၅၇၆ စက္ကန့်၊ Point. O2 တွင် မြောက် လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၈ မိနစ် ၈၄၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁ မိနစ် ၅၀၆ စက္ကန့်၊ Point. P2 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၉ မိနစ် ၃၁၁ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၃ မိနစ် ၇၀၁ စက္ကန့်၊ Point. O3 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၆ မိနစ် ၄၃၄ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂ မိနစ် ၂၉ စက္ကန့်၊ Point. P3 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၆ မိနစ် ၈၈၉ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၄ မိနစ် ၄၆၄ စက္ကန့်၊ Point. O4 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၄ မိနစ် ၃ စက္ကန့်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂ မိနစ် ၅၈၇ စက္ကန့်၊ Point. P4 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၄ မိနစ် ၄၄၉ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၄ မိနစ် ၈၁ စက္ကန့်၊ Point. O5 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၂ ဒီဂရီ ၄၇ မိနစ် ၂၄၁ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂ မိနစ် ၄၅၃ စက္ကန့်၊ Point. P5 တွင် မြောက် လတ္တီတွဒ် ၁၂ ဒီဂရီ ၄၇ မိနစ် ၃၇ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၄ မိနစ် ၆၉ စက္ကန့်၊ Point. O6 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၂ ဒီဂရီ ၄၁ မိနစ် ၅၉၁ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁ မိနစ် ၈၄၆ စက္ကန့်၊ Point. P6 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၂ ဒီဂရီ ၄၁ မိနစ် ၄၂၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၄ မိနစ် ၀၅၇ စက္ကန့်၊ Point. O7 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၂ ဒီဂရီ ၂၇ မိနစ် ၇၈၄ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၅၉ မိနစ် ၆၇၁ စက္ကန့်၊ Point. P7 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၂ ဒီဂရီ ၂၇ မိနစ် ၆၀၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁ မိနစ် ၈၇၇ စက္ကန့်၊ Point. O8 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၂ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ် ၇၂၃ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၅၉ မိနစ် ၅၈ စက္ကန့်၊ Point. P8 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၂ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ် ၈၇၄ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁ မိနစ် ၇၉၉ စက္ကန့်၊ Point. O9 တွင် မြောက် လတ္တီတွဒ် ၁၂ ဒီဂရီ ၆ မိနစ် ၉၃၄ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁ မိနစ် ၂၈၂ စက္ကန့်၊ Point. P9 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၂ ဒီဂရီ ၆ မိနစ် ၉၉၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၃ မိနစ် ၄၉၈ စက္ကန့်၊ Point. O10 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၁ ဒီဂရီ ၅၉ မိနစ် ၄၅၃ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၀ မိနစ် ၇၅၅ စက္ကန့်၊ Point. P10 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၁ ဒီဂရီ ၅၉ မိနစ် ၁၈၆ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂ မိနစ် ၉၅၃ စက္ကန့်၊ Point. O11 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၁ ဒီဂရီ ၇ မိနစ် ၈၂၁ စက္ကန့်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၄၉ မိနစ် ၉၄၂ စက္ကန့်၊ Point. P11 တွင် မြောက် လတ္တီတွဒ် ၁၁ ဒီဂရီ ၇ မိနစ် ၀၈၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၅၂ မိနစ် ၀၄၄ စက္ကန့်၊ Point. O12 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၁ ဒီဂရီ ၀ မိနစ် ၆၁၉ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၄၇ မိနစ် ၅၀၁ စက္ကန့်၊ Point.P12 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၁ ဒီဂရီ ၀ မိနစ် ၁၆၆ စက္ကန့်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၄၉ မိနစ် ၆၈၁ စက္ကန့်၊ Point. O13 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၀ ဒီဂရီ ၄၉ မိနစ် ၅၇၅ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၄၆ မိနစ် ၄၅၁ စက္ကန့်၊ Point. P13 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၀ ဒီဂရီ ၄၈ မိနစ် ၉၇၃ စက္ကန့်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၄၈ မိနစ် ၆၂၅ စက္ကန့်၊ Point. Q1 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၀ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ် ၉၃၈ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၄၂ မိနစ် ၁၈ စက္ကန့်၊ Point. R1 တွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၀ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ် ၈၅၇ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၄၄ မိနစ် ၃၈၄ စက္ကန့်၊ Point. Q2 တွင် မြောက် လတ္တီတွဒ် ၉ ဒီဂရီ ၃၈ မိနစ် ၈၁၅ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၄၀ မိနစ် ၆၁၄ စက္ကန့်၊ Point. R2 တွင် မြောက်လတ္တီ တွဒ် ၉ ဒီဂရီ ၃၈ မိနစ် ၉၄၈ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၄၂ မိနစ် ၈၉၇ စက္ကန့်တို့တွင် (၀၅.၁၂.၂၀၂၀) မှ (၂၈.၂.၂၀၂၁)အထိ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ (၂၀.၁၁.၂၀၂၀) မှ (၂၈.၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေစဉ် လုပ်ငန်းကြန့်ကြာမှု မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အထက် ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာမှ ၂ ကီလိုမီတာပတ်လည်အတွင်း သင်္ဘော ကြီးငယ်များ၊ ကုန်တင်စက်လှေများ၊ ငါးဖမ်းသင်္ဘောများ၊ စက်တပ်သမ္ဗန်များ ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းနှင့် ကျောက်ချရပ်နားခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ ငါးဖမ်း ကိရိယာများ ချထားခြင်း မရှိစေရန်အတွက် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြား မှုဦးစီးဌာနက ရေကြောင်းသတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားကြောင်း သိရသည်။
*** ၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ SSE/NM/၀၁၆/၂၀၂၀ ဖြင့် ထုတ်ပြန် ထားသော ရေကြောင်း သတိပေးချက်အား ဤရေကြောင်းသတိပေးချက်စာဖြင့် လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။